Yaya Toure oo ka laabtay ka fariisiga ciyaaraha caalamiga ah - BBC News Somali
Yaya Toure oo ka laabtay ka fariisiga ciyaaraha caalamiga ah
Image caption Yaya Toure oo ah kabtanka Ivory Coast ayaa ku guulaystay koobkii Qaramada Afrika ee sannadkii 2015kii
Yaya Toure oo khadka dhexe uga dheela Manchester City ayaa ka laabtay ka fariisashadii xulka Qaranka Ivory Coast.
Ciyaaryahanka 34 jirka ah ayaa ciyaaraha caalamiga ah ka fariistay bishii Sabtembar ee sannadkii 2016ka, isaga oo qarankiisa u saftay in kabadan 100 ciyaarood lana qaaday Koobkii Qarammada Qaaradda Afrika ee 2015kii.
"Waan jeclahay waddankayga, diyaar baana u ahayn in la igu soo daro xulashada qaranka," ayuu ku soo qoray ciwaankiisa Twitter-ka.
"Waxaan doonayaa in aan caawiyo jiilka soo kacaya oon adeegsado khibraddayda oo dhan, si ay u wada farxaan dadka reer Ivory Coast oo dhan!".
Toure ayaa kooxda Manchester City kaga soo biiray Barcelona sannadkii 2010kii, saddex kulan oo kali ah ayuuna ka saftay Horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan.
Diyaarad ku dhacday badda Ivory Coast
Salomon Kalou oo lagu soo celiyay xulka qaranka Ivory Coast
Ivory Coast oo ka hartay Koobka Qaramada Afrika
Wakiilkiisa Dimitry Seluk ayaa Twitterka ku soo qoray "Yaya Toure wuxuu go'aansaday in uu dib ugu ciyaaro xulka Qaranka ee Ivory Coast. Wuxuu doonayaa in uu koob kale kula guulaysto Maroodiyada Ivory Coast."
Ivory Coast ayaa ka hartay Koobka Adduunka ee Ruushka lagu qabanayo sannadka foodda inagu soo haya ee 2018ka, balse bisha Maarso ayay billaabi doontaa ciyaaraha loogu soo bixi doono Koobka Kubadda Cagta ee Qaramada Qaaradda Afrika ee sannadka 2019ka.